6 Mampianatra torohevitra ho an'ny mpianatra mpianatra: Manatsara ny lahateninao
Ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny Sekoly ambony
6 Torohevitra mba hamelomana ny sori-dalanao
Mpianatra nahazo diplaoma maro no mahita ny lohan'ny efitrano fianarana, voalohany indrindra ho mpanampy mpampianatra ary taorian'ireo mpampianatra. Na izany aza, ny fianarana diplaoma matetika dia tsy mampianatra ny mpianatra ny fomba ampianarina fa tsy ny mpampianatra mpianatra rehetra dia manompo voalohany amin'ny TAs. Fa kosa, ny ankamaroan'ny mpianatra nahazo diplaoma dia nampianatra kilasy fianarana ambony izay tsy dia nisy fampianarana niainana. Rehefa miatrika fanamby ny fampianarana na dia misy traikefa kely aza, ny ankamaroan'ny mpianatra dia mifantoka amin'ireo teknika niainan'izy ireo fony izy mpianatra, ary matetika ny fomba fampianarana.
Ny famelabelarana dia fomba nentim-paharazana amin'ny fampianarana, angamba ny endrika tranainy indrindra. Manana ny mpanenjika azy izy ireo izay miady hevitra fa fitaovana fanabeazana. Na izany aza, ny fehezanteny dia tsy mandeha foana. Ny lahateny tsara dia tsy lisitr'ireo zava-misy fotsiny na famerenana indray ny boky fianarana, fa ny toriteny mahantra dia maharary ho an'ny mpianatra sy mpampianatra. Ny lahateny iray mahomby dia vokatry ny fandrindrana sy ny fanaovana safidy maromaro - ary tsy mila manambony izany. Ireto manaraka ireto dia toro-hevitra vitsivitsy momba ny fanomanana ny lesona sy ny kilasy.
1. Aza mandrakotra izany rehetra izany
Manajanona ny fanomanana ny fotoam-pianarana. Tsy ho afaka handrakotra ny zavatra rehetra ao amin'ny lahatsoratra sy ireo vakiteny voatondro ianao. Ekeo izany. Amboary ny lahateninao amin'ny lohahevitra manan-danja indrindra amin'ny famoahana vakiteny, lohahevitra iray avy amin'ny famakiana izay mety ho sarotra amin'ny mpianatra, na fitaovana izay tsy hita ao anaty lahatsoratra. Hazavao amin'ny mpianatra fa tsy hamerina ny ankamaroan'ny fitaovana ao amin'ny famakiana voatondro, ary ny asany dia ny mamaky amim-pitandremana sy mamakafaka, mamantatra ary mametraka fanontaniana momba ny famakiana any am-pianarana.
2. Manaova safidy
Ny lahateninao dia tokony hanolotra olana mihoatra ny telo na efatra , miaraka amin'ny fotoana ho an'ny ohatra sy fanontaniana. Misy zavatra mihoatra noho ny hevitra vitsivitsy ary ny mpianatrao dia ho sahiran-tsaina. Tadiavo ny hafatra manan-danja ao amin'ny lahateninao ary esory avy eo ny firavaka. Omeo ny taolana feno taolam-paty ao anaty tantara fohy.
Horaisin'ny mpianatra mora foana ireo lahateny raha toa ka vitsy an'isa, mazava, ary mifandray amin'ny ohatra.
3. Ampiasao ao amin'ny Toko kely
Atero ny lahateninao mba hanolorana azy ireo ao anatin'ny 20 minitra. Inona no tsy mety amin'ny lahateny 1- na 2 ora? Ny fikarohana dia mampiseho fa ny mpianatra dia mahatsiaro ny laharana voalohany sy ny folo minitra farany amin'ny lahateny, saingy kely ny fotoana tafiditra. Ireo mpianatra ao amin'ny oniversite dia manana fotoana voafaritra voafaritra - ka manararaotra izany mba hananganana ny kilasinao. Fidio ny fitaovam-pandrosoana isaky ny mini-lektion isaky ny minitra 20 minitra ary manao zavatra hafa: Mametraha fanontaniana mifanakalo resaka, fandefasana fanoratana fohy, fanadihadiana madinika, na asa miezaka hamaha olana.
4. Amporisiho ny fizotran'ny fanatontosana
Ny fianarana dia dingana arahina. Ny mpianatra dia tokony hieritreritra momba ny fitaovana, hanao fifandraisana, mifandray fahalalana vaovao amin'ny efa fantatra, ary hampihatra fahalalana amin'ny toe-javatra vaovao. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny vaovao ihany no hianarantsika azy. Mpampianatra mahomby dia mampiasa teknika fianarana mavitrika ao am-pianarana. Ny fianarana mavitrika dia fianarana mifantoka amin'ny mpianatra izay mitarika ny mpianatra hanamboatra ny fitaovana hamaha ny olana, hamaly fanontaniana, hijerena trangan-javatra, hifanakalo hevitra, manazava, mifanakalo hevitra, mandrisika ary mamolavola fanontaniana manokana.
Ny mpianatra dia maniry ny mianatra teknika mavitrika satria mandray anjara sy mahafinaritra izy ireo.
5. Mametraha fanontaniana mandinika
Ny fomba tsotra indrindra amin'ny fampiasana teknika fianarana mavitrika ao an-dakilasy dia ny mametraka fanontaniana misaintsaina, fa tsy eny na tsia, fa ireo izay mitaky ny mpianatra hieritreritra. Ohatra, "Inona no hataonao amin'io toe-javatra manokana io? Ahoana no hamaharanao an'io olana io? "Ny fanontaniana mipoitra dia sarotra ary mitaky fotoana ny mieritreritra, koa aoka ho vonona ny hiandry valiny (azo inoana fa farafahakeliny 30 segondra). Tohizo ny fahanginana.
6. Manorata azy ireo
Aza manontany fotsiny ny fanontaniana ifanakalozan-kevitra, mangataha ny mpianatra hanoratra ny fanontaniana voalohany mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 minitra, ary alao ny valiny. Ny tombotsoa amin'ny fangatahana ny mpianatra handinika ilay fanontaniana an-tsoratra dia ny hoe hanana fotoana hisaina amin'ny valinteniny izy ireo ary hahatsapa fifaliana kokoa amin'ny fomba fijeriny ny hevitr'izy ireo, tsy hatahotra ny hanadino ny hevitrao.
Ny fangatahana ny mpianatra hiasa miaraka amin'ny votoatin'ny fandaharam-pianarana ary mamaritra ny fomba hifanaraka amin'ny traikefan'izy ireo dia ahafahan'izy ireo mianatra amin'ny fomba manokana, ka mahatonga ny zavatra manan-danja manokana, izay ao am-pon'ny fianarana mavitrika.
Ankoatra ny tombontsoa ara-pianakaviana, ny famongorana lahateny iray ary ny fanelanelanana azy amin'ny adihevitra sy ny fianarana mavitrika dia mampihatra ny fanerena anao amin'ny maha mpampianatra anao. Adiny iray sy dimy ambinifolo minitra, na dimampolo minitra mihitsy aza dia maharitra ela. Ary efa ela no nihaino. Andramo ireto teknikam-pitsaboana ireto ary araho ny paikady ataonao mba hanamora kokoa ny olon-drehetra ary hampitombo ny fahombiazanao amin'ny fahombiazana ao amin'ny efitrano fianarana.
Ny GM vs. GMAT: Loha-tampon'ny mpifaninana
MicroMasters: Ny Tetezana eo amin'ny mari-pahaizana licence sy ny Graduate Graduate
Tokony ho Mpampianatra E-mail ao amin'ny Kilasim-pahaizana Potential?
Nahoana ianao no tsy nianatra? Angamba tsy Ianao, izy ireo izany
Moa ve ny FAFSA ho an'ny Grad School?
Fahatakarana ny famaritana ny mpilatsaka hofidiana dokotera
5 Soso-kevitra amin'ny fampiharana amin'ny programa fianarana amin'ny fianarana amin'ny sehatry ny klinika na toro-hevitra
Top Masters of Social Work Programs (MSW)
Ny fomba hiomanana ny Vitae amin'ny fandaharam-pampianarana
Inona no atao hoe mpanampy mpikaroka?
Ahoana no fomba handraisana ny firaketana akademika ofisialinao
Famaritana sy anarana avy amin'ny MUNOZ
Top Rock Inspirational Rock Songs
Fandinihana ny isotope miorina amin'ny arkeôlôgy - fanamafisana ny teny anglisy
Firy no Tokony Handrasanao Mpampianatra Manokana?
Ostpolitik: Miteny any Atsinanana ny Andrefana Andrefana
Fanaovana teti-bola sy tahiry fianarana fianarana fianarana fianarana
Ady & Fifandirana Frantsay: Indiana Marsh Jeffery Amherst
10 Karazana Gramma (ary manisa)
Structures chimiques manomboka amin'ny taratasy
Lisitry ny singa - Anarana, nomerika, Symbole element
Ahoana no fomba handraisana trano fandroana madinika?
Fanadinadinana: Channing Tatum dia mikatsaka ny 'hiakatra'
Miorina Amin'ny Baiboly ve ny Sikhs?
Mpiompy voajanahary voajanahary
Ny rafitry ny Caste ao India
Iza moa i Noah McVicker?
Inona ny Fitsarana Moot?
Fikajiana mason-tsivana: gallons, karana, pintsina ary dite
Inona no fialan-tsasatra tsara indrindra?
Ampiasao ny marika hosodoko mba hanoratana ny sary hosodoko
ICE na fampiharana ny fampindramam-bola